လှနျခဲ့တဲ့ သုံးနှဈက ကတိတဈခုကွောငျ့ ဖီနာဖာခြီကို ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့ အိုဇေး – Sports Soccer News
လှနျခဲ့တဲ့ သုံးနှဈက ကတိတဈခုကွောငျ့ ဖီနာဖာခြီကို ပွောငျးရှခေဲ့တဲ့ အိုဇေး
အာဆငျနယျ ကှငျးလယျကစားမား အိုဇေးရဲ့ အာဆငျနယျ အသငျးက ထှကျခှာမညျ့ အပွောငျးအရှေ့ ကို ယခုလမကုနျခငျ အပွီးသတျ ပွုလုပျမှာ ဖွဈပါတယျ။
နှဈဖကျ အသငျးမြားမှ တရားဝငျကွငွောမှု မရှိသေးပမေယျ့ မာဆကျအိုဇေးဟာ ဖီနာဖာခြီ အသငျးသို့ ပွောငျးရှမေ့ညျ့ သတငျးမှာ ရာနှုနျးပွညျ့ သခြောလကျြရှိပွီး ဖွဈနပေါပွီ။
အာဆငျနယျ အသငျးမှ ပွောငျးရှခှေ့ငျ့ ရရှိဖို့ အကွာကွီး စောငျ့ခဲ့ရတဲ့ ဂြာမနျ ကှငျးလယျလူ အတှကျတော့ ကှငျးဘေးမှာ ထီးဆောငျးရငျး ဘောလုံးပှဲ ကွညျ့ခဲ့ရတဲ့ အခြိနျတှေ ဟာ ခကျခဲကွမျးတမျး လှနျးနခေဲ့မှာပါ။
၂၀၂၀ မတျလ ကတညျးက ဘောလုံး ကစားခှငျ့ မရရှိတော့တဲ့ အသကျ ၃၂ အရှယျ ကစားသမား အဖို့ အသငျးသဈ ပွောငျးရှေ့ ရေးအတှကျ လကျရှိမှာ ဆှေးနှေးခှငျ့ ရရှိခဲ့ပွီ ဖွဈပွီး ရာသီကုနျမှ အာဆငျနယျနဲ့ စာခြုပျ သကျတမျး ကုနျဆုံးမှာ ဖွဈပမေယျ့ လကျရှိ အပွောငျး အရှေ့ ကာလမှာ ပွောငျးရှတေ့ာက နှဈဖကျလုံး အတှကျ အကြိုး ရှိမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
အိုဇေးဟာ အမရေိကနျကို ပွောငျးရှလေ့ာဖို့ ဒီစီ ယူနိုကျတကျ ရဲ့ မွငျ့မားလှတဲ့ လုပျခလစာ အပွငျ ကျောဖီဆိုငျ တဈဆိုငျကိုပါ ပေး၍ ကမျးလှမျးမှုကို ရရှိ ခဲ့ကွောငျး အိုဇေးရဲ့ အေးဂငျြ့က ပွောဆို ခဲ့ပါတယျ။
သို့ပမေယျ့ အဈစတနျဘူ အခွစေိုကျ ဖီနာဖာခြီ အသငျးက အိုဇေး ပွောငျးရှဖေို့ ဆုံးဖွတျထားတဲ့ အသငျး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
တူရကီ နာမညျကွီး သတငျးဌာန တဈခုဖွဈတဲ့ Spor X ရဲ့ အဆိုအရ အိုဇေးဟာ အာဆငျနယျ အသငျးနဲ့ စာခြုပျ ကုနျ‌ဆုံးသှား လြှငျ ဖီနာဖာခြီ အသငျးသို့ ပွောငျးရှေ့ ကစားမညျဟု မိခငျဖွဈသူ ကို ကတိပေးခဲ့ကွောငျး ဖျောပွထားပါတယျ။
ဂြာမနီမှာ ကွီးပငျြးခဲ့ပွီး ဂြာမနီဘောလုံးလကျရှေးစငျ ကစားသမားတဈယောကျ ဖွဈတဲ့ အိုဇေးရဲ့ မှေးရပျဇာတိ ဟာ တူရကီနိုငျငံဖွဈပွီး မိသားစု က ဖီနာဖာခြီ ပရိတျသတျ မြား ဖွဈကွပါတယျ။ ထို့ကွောငျ့ အိုဇေး အနနေဲ့ မွငျ့မားတဲ့ လုပျခ လစာတှကေို ပယျခပြွီး မိခငျကို ပေးခဲ့တဲ့ ကတိကို တညျခဲ့တာ အံ့ဩစရာ မဟုတျကွောငျး ရေးသား ထားခဲ့ပါတယျ။
အလှူအတနျး ရကျရောပွီး သဘောကောငျးတဲ့ အိုဇေး ဟာ ကိုဗဈကပျရောဂါ ရိုကျခတျမှုကွောငျ့ အာဆငျနယျ အသငျးရဲ့ ငှကွေေး စီမံမှုအရ ဝနျထမျးလြော့ခြ တဲ့အထဲ ပါဝငျခဲ့တဲ့ အာဆငျနယျ လာဘျကောငျ ရုပျလေး ဂနျးနားဆောရပျဈ ကို သူကိုယျတိုငျ လစာပေး၍ အသငျးမှာ ဆကျလကျ ရှိနေ စပေမေယျ့ အိုဇေးပွောငျးရှေ့ သှားခဲ့ရငျ လာဘျကောငျရုပျလေး အနနေဲ့ အာဆငျနယျ အသငျးမှာ မွငျတှခှေ့ငျ့ ရှိနိုငျပါ ဦးမလား ၊ အာဆငျနယျ အသငျး အနနေဲ့ ပွနျလညျ လြော့ခြ ပဈမလား ဆိုတာတော့ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
လကျရှိ အိုဇေး နဲ့ ဖီနာဖာခြီ တို့ရဲ့ အပွောငျးအရှကေို့ သတငျးဌာန အတျောမြားမြားက ဖျောပွနကွေတာဖွဈလို့ မကွာခငျမှာ Official တကျလာဖို့ရှိပါတယျ.
အာဆင်နယ် ကွင်းလယ်ကစားမား အိုဇေးရဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းက ထွက်ခွာမည့် အပြောင်းအရွေ့ ကို ယခုလမကုန်ခင် အပြီးသတ် ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ဖက်အသင်းများမှ တရားဝင်ကြေငြာမှု မရှိသေးပေမယ့် မာဆက်အိုဇေးဟာ ဖီနာဖာချီ အသင်းသို့ ပြောင်းရွေ့မည့် သတင်းမှာ ရာနှုန်းပြည့် သေချာလျက်ရှိပြီး ဖြစ်နေပါပြီ။
အာဆင်နယ် အသင်းမှ ပြောင်းရွေ့ခွင့် ရရှိဖို့ အကြာကြီး စောင့်ခဲ့ရတဲ့ ဂျာမန်ကွင်းလယ်လူ အတွက်တော့ ကွင်းဘေးမှာ ထီးဆောင်းရင်း ဘောလုံးပွဲ ကြည့်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ ဟာ ခက်ခဲကြမ်းတမ်း လွန်းနေခဲ့မှာပါ။
၂၀၂၀ မတ်လ ကတည်းက ဘောလုံးကစားခွင့် မရရှိတော့တဲ့ အသက် ၃၂ အရွယ် ကစားသမား အဖို့ အသင်းသစ် ပြောင်းရွေ့ ရေးအတွက် လက်ရှိမှာ ဆွေးနွေးခွင့် ရရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး ရာသီကုန်မှ အာဆင်နယ်နဲ့ စာချုပ် သက်တမ်း ကုန်ဆုံးမှာ ဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိ အပြောင်းအရွေ့ ကာလမှာ ပြောင်းရွေ့တာက နှစ်ဖက်လုံး အတွက် အကျိုးရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိုဇေးဟာ အမေရိကန်ကို ပြောင်းရွေ့လာဖို့ ဒီစီ ယူနိုက်တက်ရဲ့ မြင့်မားလှတဲ့ လုပ်ခလစာ အပြင် ကော်ဖီဆိုင် တစ်ဆိုင်ကိုပါ ပေး၍ ကမ်းလှမ်းမှုကို ရရှိ ခဲ့ကြောင်း အိုဇေးရဲ့ အေးဂျင့်က ပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အစ်စတန်ဘူ အခြေစိုက် ဖီနာဖာချီ အသင်းက အိုဇေး ပြောင်းရွေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အသင်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
တူရကီ နာမည်ကြီး သတင်းဌာန တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Spor X ရဲ့ အဆိုအရ အိုဇေးဟာ အာဆင်နယ် အသင်းနဲ့ စာချုပ် ကုန်‌ဆုံးသွား လျှင် ဖီနာဖာချီ အသင်းသို့ ပြောင်းရွေ့ ကစားမည်ဟု မိခင်ဖြစ်သူ ကို ကတိပေးခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဂျာမနီမှာ ကြီးပျင်းခဲ့ပြီး ဂျာမနီဘောလုံးလက်ရွေးစင် ကစားသမားတစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ အိုဇေးရဲ့ မွေးရပ်ဇာတိ ဟာ တူရကီနိုင်ငံဖြစ်ပြီး မိသားစု က ဖီနာဖာချီ ပရိတ်သတ်များ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အိုဇေး အနေနဲ့ မြင့်မားတဲ့ လုပ်ခ လစာတွေကို ပယ်ချပြီး မိခင်ကို ပေးခဲ့တဲ့ ကတိကို တည်ခဲ့တာ အံ့ဩစရာမဟုတ်ကြောင်း ရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။
အလှူအတန်းရက်ရောပြီး သဘောကောင်းတဲ့ အိုဇေး ဟာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ငွေကြေးစီမံမှု ဝန်ထမ်းလျော့ချ တဲ့အထဲပါဝင်ခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်လာဘ်ကောင် ရုပ်လေး ဂန်းနားဆောရပ်စ် ကို သူကိုယ်တိုင် လစာပေး၍ အသင်းမှာ ဆက်လက်ရှိနေစေပေမယ့် အိုဇေးပြောင်းရွေ့သွားခဲ့ရင် လာဘ်ကောင်ရုပ်လေး အနေနဲ့ အာဆင်နယ် အသင်းမှာ မြင်တွေ့ခွင့် ရှိနိုင်ပါဦးမလား ၊ အာဆင်နယ် အသင်းအနေနဲ့ ပြန်လည် လျော့ချ ပစ်မလားဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
လက်ရှိ အိုဇေး နဲ့ ဖီနာဖာချီ တို့ရဲ့ အပြောင်းအရွေ့ကို သတင်းဌာန အတော်များများက ဖော်ပြနေကြတာဖြစ်လို့ မကြာခင်မှာ Official တက်လာဖို့ရှိပါတယ်.
အပွောငျးအရှကေ့ာလမှာ ချေါယူမယျ့ လီဗာပူးရဲ့ ပဈမှတျ သုံးယောကျ
ဆီးမီးဖိုငျနယျတိုငျးရှုံးတဲ့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ နဲ့ နောကျဆုံးရ သတငျးမြား